Breaking ……. आमाको नि`धन भएको केहि दिनमै नायक इरफान खानको निधन ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/Breaking ……. आमाको नि`धन भएको केहि दिनमै नायक इरफान खानको निधन !
बलिउड नायक इरफान खानको नि`धन भएको छ ।उनको ५३ वर्षको उमेरमा नि`धन भएको हो । स्वा`स्थ्यमा खराबी देखिएपछि उनलाई मुम्बई स्थित कोकिलाबेन धिरुभाई अम्बानी अस्पतालमा मंग`लबार पुर्याइएको थियो । जहाँ उनको आइ.सी.यू.मा राखेर उपचार गरिँै थियो ।
भारतीय समाचार माध्यम जुम टिभीले उनको नि`धन भएको खबर प्रकाशित गरेको हो ।
जयपुर राज-स्थानमा सन् १९६६ मा जन्मिएका खान थिएटर बाट सिनेमाबाट आएका थिए। उनको अ`न्तिम सिनेमा सात महिना अघि रिलिज भएको अंग्रे`जी मिडियम हो। गत शनिबार उनकी आमाको निध`न भएको थियो। पेटमा संक्र`मण भएकाले खानलाई आइ.सी.यू.मा भर्ना गरिएको उनका प्रवक्ताले मंग`लबार जनाएका थिए। गत शनिबार मात्रै उनकी आमा सइदा बेगमको निध`न भएको थियो। उनकी आमा ९५ वर्षकी थिइन्।
दुई वर्षअघि सन् २०१८ मा इरफानले आफूमा बिमा`री रहेको थाहा पाएका थिए । उनी आफैले यो खबर शेयर गरेका थिए । उनले ट्वि`ट गरेका थिए, ‘जिन्दगी अचानक केही यस्तो हुन्छ, जसले तपा`ईँलाई अघि लिएर जान्छ । मेरो जिन्दगीमा पछिल्लो कही दिन यस्तै भइरहेको छ । मलाई न्यु`रो`एन्डोक्राइन ट्युमर नामक बि`मा`री भएको छ । मेरा नजिकका आ`फन्तको माया र साहसले मलाई आ`श जगाएको छ ।’